Ghọta Ihe Mere na Ọkara ... | Martech Zone
Dabere na Dictionary.com:
Ọkara: otu n'ime ụzọ ma ọ bụ ọwa nke nkwukọrịta izugbe, ozi, ma ọ bụ ntụrụndụ na ọha mmadụ, dịka akwụkwọ akụkọ, redio, ma ọ bụ telivishọn.
Ikekwe ọrụ kachasị sie ike maka sọftụwia ọ bụla dị ka ọrụ bụ imeri usoro nke ụlọ ọrụ ị na-eje ozi. Aga m ekwu okwu kpọmkwem na ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na ihe atụ a, mana ọ bụ otu ihe ahụ na ụlọ ọrụ ecommerce ọ bụla… ịghọta ihe ndị ahịa gị na-eme online vs. na ụlọ ahịa gị, na ekwentị gị, ma ọ bụ nzukọ gị na ndị ọrụ gị ga - enyere gị aka kacha mma hazie interface ziri ezi iji mee ka ọ dịkwuo ala maka ndị ahịa ndị ọzọ.
Na ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ikekwe usoro kachasị sie ike bụ na ịhazi ịntanetị ga-egosipụta nhọrọ dị n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Ọ bụghị eziokwu. Ọ bụ usoro dị iche. Iningkọwara ndị na-ahụ maka ụlọ oriri na ọteụ thisụ nke a nwere ike ịbụ njikọ aka siri ike. Ha ma ahịa ha karịa onye ọ bụla, mana ha amaghị ya n'ịntanetị.
Lọ oriri na ọrantsụrantsụ bụ azụmahịa na-adọrọ adọrọ… nri, uwe ndị ọrụ, ụdị ụlọ oriri na ọ ofụ restaurantụ… nkọwa niile na-enye nkọwa zuru ezu. Wepụ ma ọ bụ nnyefe enweghị ike ịkọ ahụmịhe dị n'ime ụlọ nri, mana ha nwere ike ichetara gị ya. Orderhazi ịntanetị dị ka ihe ọ bụla nri + dị mma. Oge dị mma maka ịpụ apụ ma ọ bụ ibuga ya, ịdị mma nke iri nri n'ụlọ gị, ịdị mma nke ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ… ọbụlagodi ịghara ịkọrọ onye si n'ụlọ nri ahụ okwu.
Ọ bụrụ na ụlọ oriri na ọ worksụ restaurantụ na-arụ ọrụ iji mee ka ọnụnọ ha n'ịntanetị dị ka ihe dị mgbagwoju anya dị ka onyinye dị n'ime ha, ha nwere ike ịbụ na ha na-emetụta nzube nke ya mere onye ọrụ gara ntanetị na mbụ. Ndị ahịa anyị na-enye ntanetị na ntanetị na nri, mana imirikiti bụ ụlọ iri nri (ọ bụghị nri ngwa ngwa, ọ bụghị 5-star). Ọ na-apụta ìhè na ndị ahịa anyị kachasị nwee obi ụtọ bụ ndị na-enye obere nhọrọ.
Inye efere nri abalị na nhọrọ 4 amanyere, nhọrọ 10 ọzọ, yana ụfọdụ ngbanwe nwere ike gosipụta nhọrọ dị na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ - mana onye ọrụ gị ọ ga-arapara iji chọpụta nke ahụ? Echeghị m. Kama - weta nhọrọ nke efere kachasị mara gị, wee hụ ihe ga - eme na - esote.
Isntanetị bụ ọkara. Na ihe ọ bụla na-ajụ, ị ga-amata omume n'azụ iji na-ajụ. Ghọta omume ahụ na itinye ya n'ọrụ ga-akpali gị ịga nke ọma.
Tags: Ụlọ ọrụ na -ere ahịa EmailOnye na-ere ahịa Email Emailasịrị ịntanetịJikwaa Email Marketingteknụzụ ahịaOdi Ohu ohuruAhịa Email Ọkachamarammekọrịta ọhaOnye nkwadoteknụzụ ga-egbu
Black Swan na Ahụekere Bute na Jelii Sandwiches
Michael Vanderdonk kwuru
Dec 6, 2007 na 8:31 PM
Echiche na-adọrọ mmasị na echere m na ị ziri ezi.
Enwere m ụlọ oriri na ọ restaurantụ localụ dị n'ógbè anyị nke na-eri nri iri nri ma wepụ. M nwere ike kpọọ ha ma ọ bụ ziga ha akwụkwọ ka m nye ha nri. Enwere m ike iri nri mgbe m chọrọ 'abalị n'abalị'. Aga m apụ apụ mgbe m chọrọ 'abalị' dị mfe. Aga m ezigara ha ozi mgbe m na-eme atụmatụ oriri ma ọ bụ mmemme ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, agaghị m eme, zitere ha email ka ijere tebụl - enwere ọtụtụ mgbanwe na ọ dị mfe karịa iji ekwentị. Na akụkụ tụgharịa, ọ dị mfe ịtụ nri maka ụbọchị 5 site na email.